တရုတ်နိုင်ငံနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံကြား ဒစ်ဂျစ်တယ်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု မြှင့်တင်ရန် စီမံကိန်း ၁၉ ခု လက်မှတ်ရေးထိုး - Xinhua News Agency
စင်ကာပူနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီများအကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MOU) လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနားအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ချုံချင့်၊ ဩဂုတ် ၂၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ချုံချင့်မြူနီစီပယ်တွင် ဩဂုတ် ၂၃ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သော တရုတ်-စင်ကာပူ (ချုံချင့်) နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှု (IDC) ဖိုရမ်တွင် IDC အောက်၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စီမံကိန်း ၁၉ ခု လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
IDC က စင်ကာပူနိုင်ငံနှင့် ချုံချင့်ကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသောအချက်အလက် ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသလို lower latency ၊lower packet loss နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်၍ ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်ကွန်ရက် ပါဝင်သည့် ပို၍ကောင်းမွန်သောကွန်ရက် အတွေ့အကြုံကို ပေးအပ်လျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းသည် မဟာဗျူဟာမြောက် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ တရုတ်-စင်ကာပူ (ချုံချင့်) သရုပ်ပြဆောင်ရွက်မှု၏ ထင်ရှားသောသင်္ကေတတစ်ခု ဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံက ပထမဆုံးခွင့်ပြုထားသော နိုင်ငံအချင်းချင်း ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုလည်း ဖြစ်ကြောင်း ချုံချင့် Big Data Application and Development အသင်းက ပြောခဲ့သည်။
နှစ်နိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီ ၅၀ နီးပါးက IDC ငှားရမ်းခြင်းသဘောတူစာချုပ်များကို လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း သို့မဟုတ် IDC ကို အခြေခံထားသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အဝေးမှကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ စမတ် ထောက်ပံ့သယ်ပို့လုပ်ငန်းနှင့် အခြားနယ်ပယ်များအား လွှမ်းခြုံခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံရှိ စင်ကာပူ ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီများနှင့် ၎င်းတို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ လွယ်ကူစေရန် ဖိုရမ်တွင် IDC အရ cloud အခြေပြုဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်းကို မိတ်ဆက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
19 projects inked to boost digital connectivity between China, Singapore
CHONGQING, Aug. 24 (Xinhua) — A total of 19 cooperation projects were inked under China-Singapore (Chongqing) International Dedicated Connectivity (IDC) at the IDC Forum held in southwest China’s Chongqing Municipality on Monday.
The IDC providesadedicated data channel between Singapore and Chongqing, offeringabetter network experience featuring lower latency, lower packet loss, and better network reliability.
The project isavital symbolic project of the China-Singapore (Chongqing) Demonstration Initiative on Strategic Connectivity, and it is China’s first approved country-to-country dedicated connectivity, according to Chongqing Big Data Application and Development Administration.
Nearly 50 companies from both sides have signed IDC leasing contracts or have been conducting cooperation based on the IDC, covering remote healthcare, smart logistics and other fields.
A cloud-based service platform under the IDC was also launched at the forum to facilitate Singapore companies’ businesses in China and their cooperation with their Chinese counterparts. Enditem
Photo : Lew Chuen Hong (Back, 2nd R), Chief Executive of Singapore’s Infocomm Media Development Authority, witnesses the memorandum of understanding (MOU) signing ceremony between companies in Singapore and China, at the Singapore venue of the China-Singapore (Chongqing) International Dedicated Connectivity (IDC) Forum, in Singapore, Aug. 23, 2021.
(Photo by Then Chih Wey/Xinhua)